March 2014 ~ SAI SENG SERK
ေꨡꨣꨳꨀူꨓ်းꨟဝ်းꨓꨯꨵမꨤင်ꨲပွꨀ်ꨳေꨀꨣꨳမီးတုꨀ်ꨵမꨤင်ပွꨀ်ꨳေꨀꨣꨳမီးသိူဝ်း ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ
9:48 AMPOLITICALSCIENCE No comments
Get from >>>> Ying Mok Tai Loi Facebook
9:03 AMPOLITICALSCIENCE No comments
ကျွန်တော်.သူငယ်ချင်းသစ်ပေါ. တစ်ခါမှ စကားမပြောဖူးပါဘူး Facebook ထဲကပေါ.ကျွန်တော်.ကိုလာအပ်ပြီး ကျွန်တော်.ကိုပြောပါတယ်" ပေား ကောင်မင်းကဘာလဲဘာ
ရှမ်းလဲ အဲလောက်ထိလူမျိုးကြီးရအောင် မင်းအခုရေးနေတဲ. Post တွေက ငါသိပ်မကြိုက်ဘူး။ငါတို.မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ခဲ.တာတွေဖြစ်ခဲ.ပြီးပါပြီ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်
ကျော်လာခဲ.တာ။ပြီးသွားတဲ.အတိတ်ကို အတိတ်မှာထားခဲ.ပါ။လူမျိုးရေး Conflict ဖြစ်အောင်မလုပ်ပါနဲ.လို. ကျွန်တော်.ကိုလာပြောတယ်။အခုငါတို.တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုယ် တွေ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေတဲ.အချိန် ဒီလို Post တွေမြင်ရရင် စိတ်မကောင်းပါဘူး တိုင်းရင်းသားနဲ. ငါတို.နဲ. ညီအစ်ကိုယ်တွေပဲ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုမရှိကတဲ.ကညီအစ်ကိုယ်လိုနေလာကြတာ။ဗမာအစိုးရကတိုင်းရင်းသားလူမျိုး မိန်းခလေး ယောက်ကျာ်းလေးတွေ နှိပ်စက်ခဲ.တာလဲမှန်ပါတယ်။အခုငါတို.ငြိမ်းချမ်းတိုးတက်တဲ.ပြည်ထောင်စုကြီး Federal စနစ်တည်ထောင်ကြရအောင် အတိတ်မှာဖြစ်ရပ်တွေကို အတိတ်မှမထားပဲ အခုချိန်ထိ ဆုပ်ကိုင်ပြီး စိတ်ထားနေမယ်ဆိုရင် ဘာမှမထူးပါဘူး။အခုချိန်လဲ ဗမာအစိုးရကလဲ Federal စနစ်ကိုသေသေချာချာ နားလည်ပြီ Federal စနစ်ဆိုတာ ခွဲထွက်ရေးမပာုတ်ဘူးဆိုတာ။ " သူပြောတာလဲမှန်ပါတယ်မမှားပါဘူး တကယ်ခံခဲ.ရတဲ.လူ တကယ်ရင်ကွဲနာပြီး မိသားစုပြိုပျက်သွားတာသူတို.မမြင်ဘူး။တစ်ချိန်ကမျက်ရည်နဲ.အတူထမင်းစားရေသောက်လာခဲ.တာသူတို.
မမြင်ဘူး။ကျွန်တော.်ကိုများ အမေရိကန်စနစ်ကိုကျင်.သုံးပြီး ဗီယက်နာမ် ကိုပြောတဲ.စကားနဲ.လာမနှစ်သိပ် ပါနဲ. ခံခဲ.ရတာ သေသွားခဲ.တာငါတို.အမျိုးမိသားစုဝင်တွေပါ။အတိတ်မှာအတိတ်မှမေ.ခဲ.ပါ ဆိုတဲ.စကားပဲအရမ်းထိတာ။ယောက်ကျာ်းမျက်ရည်ပာာ မိန်းခလေးမျက်ရည်ထက်ပိုပြီးတော. တန်ဖိုးရှိပါတယ် (မိန်းခလေးကိုနိမ်ချင်တာမပာုတ်ပါ)ကိုယ်.မိသားစု ၀င် ဗမာအစိုးရက သတ်သွားတာ။ပျော်ရမလား ကရမလားပြီးခဲ.တဲ.အတိတ်ကို အတိတ်မှာ လုံးဝ မထားနိုင်ပါဘူး။အဲဒါ ကျွန်တော်.ရင်တွင်းခံစားချက်ပါပဲ နားလည်ပေးပါ သူငယ်ချင်း။ သူငယ်ချင်း၏စေတနာကိုနားလည်ပါတယ်။
(ဘယ်ကသူငယ်ချင်းဘယ်သူလဲဆိုတာ မပြောတော.ပါဘူးခ) စာဖတ်သူငယ်ချင်းများ ကျွန်တော်အာတ ကြီးတယ်လို.လဲ ပြောနိုင်ပါတယ် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
8:10 AMSHANHISTORY No comments
ကလေးမြို့သည် ရှေးဟောင်း သျှမ်းနီမြို့တမြို့ဖြစ်သည်။ မြို့ရုိုးအုတ်တန်တုိုင်းနှင့် ကျုံးနေရာများကုို ယခုထိ မြင့်တွေ့နုိုင်ပါသည်။ ကလေးမြို့ကုို သျှမ်းနီစ၀်ဖှလုံ မုိုးကောင်းမင်းတရား မဟာစောလုန်ကြီး၏ သမက်တော် ကျေးတောင်ညိုသည် သာသနာတော် ၁၅၁၀ပြည့်၊ ကော်ဇ ၃၂၈ ခုနှစ် တပုို့တွဲလဆုတ် (၅) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် တည်ထာင်တော်မှု ခဲ့ပါသည်။
သက္ကရာဇ် ၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ကာလေးမြို့ စော်ဘွားစောရွှေက ဒုတိယ အကြိမ် ပြင်ဆင်ကြောင်း၊ သက္ကရာဇ် ၁၁၂၃ ခုနှစ်တွင် စော်ဘွား စောခန်း ကယ် က တတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်ကြောင်း၊ သက္ကရာဇ်၁၂၄၈ ခုနှစ် တွင် မောရိယ မင်းလှရာဇာကျော်ခေါင် ဘွဲ့ခံ စော်ဘွားမောင်ဖာကြီးက စတုတ္ထအကြိမ် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ကလေးမြို့တည်ဆောက်ထားပုံမှာ အလွန်စိတ်ဝင်စွားဖွယ်ကောင်းသည်။ မြို့ကုို ကျုံးနှစ်ထပ်ဖြင့်ကာရံထားပါသည်။
ကလေးမြို့ကုို သျှမ်းနီတုို့က ကပ်လေ(လီ)…ကပ်ဆုိုသည်မှာဈေး ... လေ(လီ) ကောင်းသော ရောင်းဝယ်ရေးကောင်တဲ့ဈေးမြို့ ဖြစ်သော
ကြောင့် ကပ်လေ(လီ) ကာလကြာရှည်လာသောအခါ ကလေးဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကလေးမြို့သည် မြို့လေးမြို ကာရံထားခြင်းကြောင့်ဆုိုသည်မှာ ရုပ်တိမရှိပါ ကလေးမြို့ တည်ပြီးမှ နောက်ပုိုင်းမှသာ ခမ်းပတ်မြို့ကုိုတည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျန်မြို့များသည် ကလေးမြို့ထက် နောက်ကြသောမြို့များဖြစ်သည်။ သမုိုင်းပါမောက္ခ ဒေါက်တာသန်းထွန်းကလည်း ကလေးမြို့ကုို ကလေး - ရောင်းဝယ်ရေး ကောင်းတဲ့ဈေးမြို့ လုို့ သျှမ်းနီသမုိုင်းနှင့် တထပ် ထဲ ဖေါ်ပြပါရှိပါသည်။
ကလေးမြို့၏ သက်တမ်း အမှန်သိနိုင်ရန်အတွက် ရှေးဟောင်း မြို့ရိုးကို တူးဖော်ပြီး အုတ်ချပ်များကို စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် ရှေးဟောင်း သုတေသနဌာနသို့ ပို့ထားကြောင်း ကလေးမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်လှိုင်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
အုတ်ချပ်များမှာ အလျား ၁၂ လက်မ၊ အနံခြောက်လက်မ၊ အထူနှစ်လက် မရှိကြောင်း၊ မြို့အကျယ်အဝန်း၊ မြို့သက်တမ်း စသည်တို့ကို သေချာစွာ သိရှိနိုင်ရန် ပြုလုပ်နေပြီး မြို့သမိုင်းပြတိုက် ထားရှိရန်လည်း စီစဉ်နေကြောင်း၊ မြို့နှင့် ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်း၊ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းများ ရှိပါက ကူညီပေးရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း ဆရာတော်က ထပ်မံမိန့်ကြားသည်။
ကလေးမြို့ သက်တမ်းသည် ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၃၂၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်ဟု ယူဆပြီး ၁၃၂၈ ခုနှစ်တွင် မြို့သက် ၁၀၀၀ ပြည့်ပွဲကို ခမ်းနားစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တကောင်းနှင့် ခေတ်ပြိုင် ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ သက်ကြီးစာပေ ပညာရှင်များထံမှ သိရသည်။
ကလေးမြို့သည် မြို့လေးမြို့ကာရံထားခြင်းကြောင်း ကာလေးမြို့ မဟုတ်ပါ။ သျှမ်းနီတုို့တည်ခဲ့ပြီး သျှမ်းနီလုိုမဲ့ခေါ်သော ကပ်လေ(လီ) ရောင်း ၀ယ်ကောင်းသောဈေးမြို့ ဆုိုတာ သျှမ်းနီလူငယ်တုိုင်း စွဲစွဲမြဲမြဲလက်ဆင့်ကမ်း မှတ်သွားကြဖုို့လုိုသည်။
တုိုင်းနုိုင်းခေါ် သျှမ်းနီ လူမျိုးတမျိုးလုံးကုို သျှမ်းဗမာဆုိုပြီး မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း နဲ့ဖော်ပြပြီး ဗမာဇာတ်လည်း တွင်းခဲ့ကြပြီးပြီ။ သမုိုင်းကုိုလည်း မြန်မာ့သမုိုင်း ဖြစ်အောင်လုပ်နေကြပြန်သည်။
သျှမ်းနီတုို့က နောင်ပူအောင်လုို့ ခေါ်သောရွာကုို ဗမာဘုန်းကြီးတပါးက ပူအောင်ဆုိုလုို့ မင်းတုို့ ပူပူပင်ပင်ဖြစ်တာ ပုိုပုိုလျှံလျှံဖြစ်အောင် နောင် ပုိုအောင်လုို့ပြောင်း ဆုိုပြီးလုိုက်ပြောင်းခုိုင်းမျိုးတာ မဖြစ်သင့်ပါ…
နောင်ပူအောင် ဆုိုတာအရင်ရွာကြီးမဖြစ်ခင်က အဖုိုးအောင်နေတဲ့အင်းရှိပါတယ်။ နောင်ဆုိုတာ " အင်း" "ပူ" ဆုိုတာအဖုိုး " အောင်"ဆုိုတာနာမည် အဖုိုးအောင်ရဲ့အင်းလုို့မဲ့ခေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဟုမ္မလင်းမှ ချင်းတွင်းမြစ်ဘေးတလျှောက် ဆန်တက်သွားလျှင် ရွာနာမည်များ များစွာကုို စနှစ်တကျဖျက်ဆီးခဲ့တာကုိုတွေ့ရပါသည်။ ဥပမာ. ဆုိုင်းနမ့် ကုို မြန်မာတ၀က် သျှမ်းတ၀က် သဲနမ့်လုို့ခေါ်တာမျိုး ပုတ်ဆေကုို ပုတ်သုိုလုိုခေါ်တာမျိုး နောင်ပန်သာကုို ညောင်ပင်သာလုို့ပြောင်းတာမျိုး ဟူးကောင်းသလ္လာမူးဧရာ မြစ်ကြီးများတလျှောက် သျှမ်းနီရွာ အင်းအုိုင်များကုို မြန်မာဆန်ဆန် လုိုက်ပြောင်းခြင်းများရှိနေသော်လည်း မည်သုို့ပင် ပြောင်းစေကာမှု ဒီနေ့သျှမ်းနီလူငယ်တုို့က အမိမိအသံဖြင့်သာ ပြန်လည်ခေါ်ဆုိုကြရန် တုိုက်တွန်းပါသည်။
ဒီနေ့သျှမ်းနီလူငယ်အပေါင်းတုို့ ငါတုို့သမုိုင်းကုို ငါတုို့ လက်ဆင့်ကမ်းဖုို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ မိန်းကောင်ဝ်၊ မိန်းယမ်း၊ မိန်းမိတ်၊ ကနေ မုိုးကောင်း၊ မုိုးညှင်း၊ မိုိုးမိတ်လည်းဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ တုိုင်းနုိုင်းကနေ သျှမ်းဗမာလည်းဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ ကုိုယ့်စကား ကုိုယ့်စာတောင် မသင်ရ မပြောနုိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ် အခုလုိုပွင့်လင်းလာတဲ့အချိန် မိတုို့၏သမုိုင်း မိမိစကား မိမိစာတွေကုို လက်ဆင့် သယ်ဆောင်ကြပါစုို့လုို့ တုိုက်တွန်းနုိုးဆော်လုိုက်ရပါသည်။
8:05 AMHEALTH No comments
နာနတ်သီးစားမိရာမှ AIDS ဖြစ်အသက် ၁၀နှစ်အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက် နာနတ်သီးစိတ်ဝယ်စားပြီး နောက် ၁၅ ရက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ နေမကောင်းစ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ မသက်သာတဲ့နောက် ဆရာဝန်ထံမှာ ဆေးကု ဆေးစစ်ချက်ယူကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ သူ့ဆီမှာ HIV ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံနေရပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ သူ့မိဘတွေကတော့ ဘယ်လိုမှ မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီနောက်မှာ ကောင်လေးရဲ့ မိသားစုဝင် အကုန် ဆေးစစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်လေးကလွဲလို့ ဘယ်သူမှ HIV ရောဂါပိုးမရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့် ဆရာတွေ ကောင်လေးကို ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတယ်ဆိုတာ သိဖို့ ကောင်လေး ဘာတွေလုပ်ခဲ့၊ သွားခဲ့၊ စားခဲ့တယ်ဆိုတာ မေးမြန်းကြပါတယ်။ ကောင်လေးဟာ ၁၀ အရွယ် ကလေးဖြစ်တာကြောင့် မူးယစ်ဆေးဝါး၊ လိင် အပျော်အပါး လိုက်စားသူလဲ မဟုတ်တာကြောင့်အတော်စဉ်းစားရကျပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကောင်လေး ဘာစားမိသလဲ ဆိုတာ မှတ်မိလိုက်ပါပြီ။ မှတ်မှတ်ရရ ညနေခင်းတစ်ခုမှာ ကောင်လေး အပြင်မှာရောင်းချတဲ့ နာနတ်သီးစိတ်ကို ၀ယ်စားမိပါတယ်တဲ့။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ဆေးရုံကနေ နာနတ်သီးရောင်းသူထံ အမြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ နာနတ်သီးသည်ရဲ့ လက်မှာ ဓါးရှရာ သူတို့တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ စုံစမ်းမေးမြန်းကြတဲ့ အခါမှာတော့ နာနတ်သီးလှီးရင်း သူ့လက်ကို မတော်တဆ ဓါးရှသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ နာနတ်သီးရောင်းတဲ့သူကို သွေးစစ်ကြည့်တဲ့နောက်မှာတော့ အားလုံး သံသယရှိနေတဲ့အတိုင်းပါပဲ သူ့ဆီမှာ HIV ဗိုင်းရပ်စ် တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အဖြေကရှင်းသွားပါပြီ။ AIDS ဝေဒနာရှင် နာနတ်သီးသည်ရဲ့ လက်ဓါးရှရာကနေ ထွက်လာတဲ့သွေးက နာနတ်သီးကနေတဆင့် ကောင်လေးဆီကို တဆင့် ရောဂါကူးစက်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ နာနတ်သီးစိတ်မှာ ပေသွားခဲ့တဲ့ သွေးကနေတဆင့် နာနတ်သီး စားသုံးမိသူ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ကောင်လေးလို ရောဂါကူးစက် ခံလိုက်ရပါသလဲ။
7:59 AMPOLITICALSCIENCE No comments
ꨁုꨳꨟဝ်း ပီꨳသိူဝ်ꨟꨀ်ꨵမိူင်း ꨁꨯꨳသင်လꨤတ်ꨳꨬꨓꨳပီꨳꨓွင်ꨵတꨯးꨟဝ်းꨁဝ် ꨀူꨳေꨀုꨵ ထိုင်တီꨳလꨯꨳေꨀုꨳꨁꨯꨳယဝ်ꨵ ꨼။ ယုꨲပꨱꨓ်လိုမ်ꨳ ꨀꨮꨤမ်းပေုꨳꨬမꨳꨟဝ်း (ꨀꨮꨤမ်းတꨯး) ꨽။ ယုꨲပေလိုမ်းꨀုင်ꨳပေုꨳတꨤင်းꨬမꨳ ꨾။ ယုꨲလိုမ်ꨳ လိꨀ်ꨳလꨤꨯးꨟဝ်းꨬလꨳ ꨟꨀ်ꨵꨁိူဝ်းတꨯးꨟဝ်း ꨓ်ꨮးꨓꨯꨵꨓꨯ လွင်ꨳယ်ꨮꨲသေပိူꨓ်ꨳ ꨀုင်ꨳပေုꨳꨬမꨳꨟဝ်း ပေုးပေုꨳတꨤင်းꨬမꨳꨟဝ်းꨡမ်ꨲ ꨀိူတ်ꨲꨟဝ်းမုး ꨟဝ်းေꨀုꨳတေꨡမ်ꨲလꨯꨳမုးꨟꨱတ်းꨀꨤꨓ်ꨳဝꨓ်ꨳမိူင်းတေုꨳထိုင်ယꨤမ်းလꨱဝ် ပေုးယဝ်ꨵေꨀုꨳပေုး ꨟဝ်းမုးꨀိူတ်ꨲပꨱꨓ် ပီꨳꨓွင်ꨵတꨯးꨟဝ်းꨓꨯꨵ ꨟဝ်းꨁꨯꨳဝုꨳ ꨀꨤမ်ꨲလီတေꨵတေꨵယဝ်ꨳ ꨀွပ်ꨳဝုꨳ ꨁိူဝ်းတꨯးꨟဝ်းꨡမ်ꨲလိူင်းꨬလꨳ ꨟဝ်းမီးꨅ်ꨮꨟꨀ်ꨵ
ꨀꨓ်။ꨀူꨉ်းꨓုꨓ်ꨮးꨓꨯꨵꨓꨯ ꨀုင်ꨳပေုꨳꨬမꨳယ်ꨮꨲသေပိူꨓ်ꨳယဝ်ꨳ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ။
ယုꨲပေꨟꨯꨵတေုꨳပေုꨳတꨤင်းꨬမꨳ ထွမ်ꨲꨀꨮꨤမ်းပေုꨳꨬမꨳꨬလꨳ ယုꨲꨟꨮ်ꨳပေုꨳꨬမꨳꨟဝ်းလꨯꨳꨅ်ꨮꨡမ်ꨲလီꨅွမ်းꨟဝ်း။ပေုးꨀမ်ꨵ
ထိုင်ပꨤင်ꨲꨟဝ်းမုး သူꨅဝ်ꨳမုး သူꨅဝ်ꨳတေꨟူꨵေꨡုꨳ ဝုꨳေꨀုꨵပꨱꨓ်ꨬမꨳꨓꨯꨵ ယꨤပ်ꨲꨅ်ꨮꨁုꨳꨟိူဝ်ꨡꨓ်ꨲဝုꨳꨓꨓ်ꨵ။ꨀူꨓ်းꨀူꨳေꨀုꨵꨀူꨳေꨀုꨵꨓꨯꨵ ꨟꨀ်ꨵꨬမꨳလိူဝ်သေပိူꨓ်ꨳယဝ်ꨳ ꨀွပ်ꨳဝုꨳ ꨬမꨳꨓꨯꨵလꨯꨳယပ်
သေ ꨀိူတ်ꨲꨁုꨳꨟဝ်းꨁဝ်မုးꨁုꨳလူး ꨀွပ်ꨳꨓꨯ ꨓမ်ꨵꨅ်ꨮꨬမꨳꨓꨯꨵတေပုးꨓမ်သေပေုꨳေꨡုꨳ။ꨟꨀ်ꨵꨁုꨳꨬလꨳ တူꨉ်းꨬမꨳꨟဝ်းꨬလꨳ ꨬမꨳꨟဝ်းꨓꨯꨵ ꨀိူတ်ꨲꨟဝ်းမုးသေ တွꨓ်ꨳတုꨲ ꨟꨀ်ꨵꨁိူဝ်းꨟꨀ်ꨵမိူင်း ꨟꨀ်ꨵꨀꨓ် ယုꨲလိုမ်းꨀုင်ꨳꨬမꨳ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ
I love mom more important everything. Don't be make your mom feel suffer and discourage .You mother is more than important on the world.
7:46 AMSHANHISTORY No comments
1:30 AMPOLITICALSCIENCE No comments
7:14 AMSHANHISTORY No comments
Shan people live primarily in the Shan State ( which is the biggest state in Myanmar) and Tai ethnic group of South East Asia, but also inhabit parts of Mandalay Division, Kachin State, and Kayin State, and in adjacent regions of China and Thailand. The Shan are estimated to number approximately6million. The capital of Shan State is Taunggyi.
2:36 AMSHANHISTORY No comments
2:25 AMSHANHISTORY No comments
9:22 AMMYOPINION No comments
*** ရင်နာစရာကြီးပါကွာ တရုတ်နဲ. အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ရတာ ***
8:29 AMMYOPINION No comments
ဒီနေ.ဒီအချိန်အထိ ကျွန်တော်.ရင်ထဲမှာ ခံစားနေရတာ ရင်နာခဲ.တာတွေဆိုတာတရုတ်မြန်မာနိုင်ငံသား စိုင်းနော်ခမ်းကို မြန်မာလူမျိုး ဗိုလ်ချုပ် ၀န်ကြီး သမ္မတ တို.ရှေ.မှာအရှင်လတ်လတ်သတ်ဖြတ်ပြနေတဲ.ပုံပာာ အရင်နာဆုံးပါပဲ။အပြစ်ရှိတဲ.သူကို ဘယ်လိုပဲအပစ်ပေးချင်ပေးပါ ရှင်းရှင်းပြောမယ် ခွေးကိုကိုက်ခိုင်းပြီး နာကြင်တဲ.၀ါဒနာကိုခံစားအောင်လုပ်ရင်လဲ ရတယ်သေနတ်နဲ. တစ်ခါထဲ သတ်ပြစ်လိုက်ရင်လဲ ရပါတယ်။အရာရာတိုင်းကြည်.ရက်တယ် မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ် တရုတ်လူမျိုး က ကောင်တွေက သတ်တ
ယ်ဆိုတာကိုတော. လုံးဝ လက်မခံပါ။မြန်မာပြည်မှာလဲ ဥပဒေရှိတယ် မြန်မာပြည်မှာတရားဥပဒေလဲရှိတယ် သေရင် မြန်မာပြည်ကိုပဲ သေစေချင်တယ် တရုတ်ဆိုတာ အခုပဲမပာုတ်ဘူး ခေတ်အဆက်ဆက်ပဲ မြန်မာလူမျိုးကိုကောင်းခဲ.တာမပာုတ်ပါဘူး ဒီနေ.
အချိန်ထိပဲ။ တရုတ်သည် မြန်မာကျေးဇူးရှင်ဆိုတာ ဗမာအစိုးရအတွက်ပာုတ်တယ်ဗမာလူမျိုးနဲ. တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအတွက်တော.မပာုတ်ပါဘူး။
တရုတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အိမ်နီးချင်း မိတ်ဆွေကောင်းမပာုတ်ပါ။တရုတ်သည် မြန်မာပြည်ကို စီးပွားရေးအဖြစ်ပဲမြင်တာ။ဒါကြောင်.ကျွန်တော် တစ်ခုပြောချင်တာပေါ. အခုမင်းတို. ၀န်ကြီး အောင်မင်း
တို. ကိုယ်ပြောင်ကြီး သိန်းစိန်တို. လုပ်နေတဲ. ငြိမ်းချမ်းရေးသည်။တိုင်းရင်းသားနဲ.ဗမာအချင်းချင်း လုပ်ရင်အောင်မြင်မည်မပာုတ်ဘူး တရုတ်ကိုပါ ခေါ်ပြီးထက်လိုက်ပါဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော. နေရာတိုင်းမှာ တရုတ်မပါရင်မပြီးလို.လေ အဲကြောင်. ဝေးဝေးမကြည်.နဲ.ပေါ. ၀ UWSA အဖွဲ.သည် တရုတ်အစိုးရကြောင်. အခုထိပဲ ကျွန်တော်မှတ်မိ.ပါတယ်။ဦးခင်ညွန်နဲ. ၀ နဲ.အပေးအယူတုန်းက အခုထိပဲ မမေ.နိုင်ဘူး။မသိတဲ.လူကပြောမှာပေါ. ဦးခင်ညွန်.သည် တိုင်းရင်းသားအပေါ်အရမ်းကောင်းတာ မြန်မာပြည်ကို ငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်နိုင်တာလဲ သူပဲလို.ပြောကြမှာနော်။ဒါပေမဲ. သေချာကြည်.ကြည်.လိုက်ပါ ဦးခင်ညွန်ရှူပ်လိုက်လို. အခုတိုင်းရင်းသားပြသာနာက အရမ်းကို Confuse ဖြစ်နေပြီဝ ဆိုတာပာိုတုန်းက မြောက်ပိုင်းမှာပဲရှိတာ တောင်ပိုင်းမှာလုံးဝ မရှိဘူး အဲဒါ ဦးခင်ညွန်နဲ. တရုတ်အစိုးရတို.ကြား ညှိ.ပြီး လုပ်လိုက်တာ။တရုတ်ကကြားဝင်ပြောပေးလို.ပေါ.။အဲကြောင်. ၀ UWSA တောင်ပိုင်းရောက်လာတာပေါ.။တောင်ပိုင်းရောက်လာတော. RCSS/SSA ၇ဲ.နားလာချပေးတော. ကယ်တပ်ပိုင်းခြင်းနီးတော. သူတို.လုပ်ချလိုက်တာအခုထိပဲ ရင်ထဲက နာစရာတွေရှိနေတုန်း။အဲဒါ တရုတ်အစိုးရ က မြန်မာပြည်ကိုဝင်ရောက် ဆုပ်ဖက် လို.ပေါ.။တရုတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသားအရေးမှာလဲ သူလဲအရေးပါတဲ.အခန်းပဲ ဘာလို.လဲဆိုတော. ဒီ BGF တို. ပြည်သူ.စစ်တို.ဆိုတာ တရုတ်ကအကြံပေးလိုက်တာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခုဖြစ်နေတဲ. လယ်ယာသိမ်းစည်းမူလဲ တရုတ်နဲ.ကင်းမယ်လို. ထင်ကြလား။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ တိုးတက်မူသည် တစ်ဝက်က မြန်မာပြည်ကပစ္စည်းတို. သစ်တို. မီးတို. ပေါ.အရာရာတိုင်းပဲ။ဗမာပြည်မှာကြတော. တရုတ်ပြည်ကရလာတဲ. တိုးတက်မူက ဘာရှိသလဲလို. မေးချင်လိုက်တာ။ပိာပိာ ဘာရမှာတုန်ကြက်တုပ်ကွေးတို. လူကုန်ကူးမူတို. မီးလောင်ပုန်းနဲ. လေးလုံးရောင်္ဂါတို.ပဲရတာပါ။စဉ်းစားကြည်.လိုက်ရင် ရင်နာစရာတွေအများကြီးပဲ။မြန်မာပြည်၏ Investment အများဆုံးနိုင်ငံသည် တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်သည် ကြည်.လိုက်လေ မန်းလေးဆို ရင် ဗမာပြည်တောင်မပာုတ်တော.ဘူး တရုတ်ပြည်ဖြစ်သွားပြီ မြောင်းနား လမ်းဘေးနား ကန်.သတ်နယ်မြေ ကျူးကျော်မြေတွေမှာကြတော. ဗမာအိမ်နဲ. တိုင်းရင်းသားအိမ်ပဲ သယံဇာတထွက်တဲ.နေရာတိုင်းပာာ တရုတ်ကိုမလွတ်ဘူး။သေချာစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်မြန်မာပြည်က လူကြီးအပေါင်းတို. တရုတ်သည် မြန်မာပြည်၏ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမပာုတ်ပါ။တစ်နေ.နဲ.တစ်နှစ် အစားအစာကနေတစ်ဆင်.သတ်ဖြတ်နေတာကိုလဲ ရှိနေတာ။အခုလဲကြည်.ပါလားUWSA သည် တရုတ်ပြည်၏မြို.သစ်ပြည်သစ်ဖြစ်နေပြီ မနာလိုလို.ဖြစ်တာမပာုတ်ပါဘူးတိုင်းရင်းသားထဲမှာ ၀ လူမျိုးတွေ ပဲဦးဆောင်မယ်ဆိုရင် လက်ခံတယ် ဒါပေမဲ.အားလုံးပာာ တရုတ်တွေကြီးပဲ။ တရုတ်ငွေသုံး တရုတ်စကားပြော အကုန်လုံးတရုတ်တွေပဲ။အဲဒါက ဦးခင်ညွန်. Confuse ခဲ.လို.။ ၀ တပ်မတော် UWSA တောင်ပိုင်းပြောင်းသွားဖို.ဆိုလဲ ဦးခင်ညွန်. ဗမာအစိုးရ ကိုယ်တိုင် ကားတွေဘာတွေစီစဉ်ပေးခဲ.တာလေ။မှတ်မိ.ကြရဲ.လားမသိဘူး အဲဒါလဲ တရုတ်အစိုးရ၏ ၀င်ရောက် အုပ်ချုပ် ၀င်ရောက် ဆုပ်ဖက်မူကြောင်ပေါ.။ဗမာပြည်ကို ကုလားမြိုမယ်လိုမစဉ်းစားနဲ.အုံးအရင်ဆုံး တရုတ်ကမြိုတော.မှာ ကုလား အိန္ဒယကလူတွေ ငါတိုပြည်ကို တရုတ်လူမျိုးလို မလုပ်ခဲ.ဘူး။မသတ်ဘူး။
အခု တရုတ်က စိုင်းနော်ခမ်းကိုသတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ သူနိုင်ငံတကာကို ပြချင်လို.ပါ ငါပာာ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လောက်အာဏာရှိသလဲ ဘယ်လောက်လွမ်းမိုးမူရှိသလဲဆိုတာကိုပြလိုက်တာပဲ။အစိုးရကိုတော. သူအုပ်ချုပ် Power ရှိတာပါ မြန်မာပြည် ဗမာလူမျိုးနဲ. တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအတွက်တော. လုံးဝ လက်မခံဘူးပဲ။မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယခု Conflict ကိုကြည်.မယ်ဆိုရင်တရုတ်စီးပွားကြောင်. ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာ ကချင်အရေးဆိုတာလဲ Gas ပိုက်လိုင်းကြောင်. စစ်ဖြစ်တာ SSPP/SSA တုန်းကလဲ ထိုနည်းပဲ တရုတ်စီးပွားကိုကာကွယ်ဖို.
တိုက်တာ လူများ လူမျိုးကောင်းစားဖို. ကိုယ်.လူမျိုးညီအစ်ကိုယ်ချင်းချင်းသတ်ဖြတ်စရာမလိုပါဘူး။ယခုထိပဲ Gas ပိုက်လိုင်းရှိတဲ.နေရာတိုင်းပဲ စစ်ဖြစ်နေတာ။တရုတ်ကြောင်. မြန်မာပြည်ကိုမတိုးတက်နိုင်အောင်လုပ်ခဲ.တာပါ။တရုတ်လူမျိုးသည် မြန်မာပြည်ကိုစစ ၀င်လာတုန်းက ဘာမှမရှိဘူး ပြန်သွားရင် ရွေတွေ ကျောက်တွေ ငွေတွေ တိုက်တွေကားတွေ သယ်သွားနိုင်တာ။မြန်မာလူမျိုးကြတော.ဘာဖြစ်သလဲသိလား လမ်းဘေးကသူတောင်းစားဖြစ်သွားပြီး မိန်းခလေးကြတော. ပြည်.တန်ဆာမ Prostitute ဖြစ်သွားရော နောက်ဆုံး မြန်မာပြည်က သယံဇတမကာ မြန်မာမိန်းခလေးပါယူလိုက်တာ။ရင်နာစရာကြီးတွေပဲ ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်တော.မှ ပြီးဆုံးမှာမပာုတ်ပါဘူး တရုတ်ကကျွန်တော်တို. မြန်မာလူမျိုးအပေါ်လုပ်ရပ်တွေကို။ တောင်တွေ. တရုတ်ရောက် မြစ်တွေ. တရုတ်ပေါက် ဒီလိုပဲ ဘယ်နေရာမှာကြည်.ကြည်. တရုတ်မရှိတဲ.မြို.ဆိုရှားပြီ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရုတ်က နေရတိုင်းလိုလိုပဲ ဗမာစကားတစ်ခွန်းမှတောင်မပြောတတ်ရင်တောင်မြန်မာပြည်လာရင် အ၇မ်းတောင်ကောင်းစားသေးတယ်။မြန်မာမိန်းခလေးများတရုတ်စကားမတတ်ပဲနဲ. တရုတ်ပြည်ကိုသွားကြည်.ပါလား ခွေး၏မယားတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ရင်နာစရာကြီးပါကွာ တရုတ်နဲ. အိမ်နီးချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ရတာ။
Sae Hark / ꨅꨤꨯးလွတ်ꨳလꨰဝ်း
ꨁ်ꨮꨳꨟူꨵꨓ်ꨮးꨀꨤင်ꨳꨅ်ꨮ ꨀူꨓ်းꨟꨱတ်း ပီꨲတူꨵꨅိတ်ꨲ (Public Military)
10:05 AMPOLITICALSCIENCE No comments
သူꨁဝ်တေꨡဝ်ꨀꨤꨓ်ꨳ မိူင်းသေꨟꨱတ်း Business ꨀူꨉ်းယဝ်ꨳꨟုး။သူဝူꨓ်ꨵ ဝꨯꨵဝုꨳသူတေꨟꨱတ်းꨟိူဝ်? တေꨁိုꨓ်းတေုꨳသူꨳ ꨟꨱတ်းမိူꨓ်ꨳꨓꨓ် DKBA ꨁဝ်ယူꨲꨟုး ? သူꨅဝ်ꨳꨟꨀ်ꨵꨁိူဝ်းတေꨵတေꨵ
ယူꨲꨟုး ꨟဝ်းꨁꨯꨳꨟူꨵ ꨓ်ꨮးꨀꨤင်ꨳꨅ်ꨮသူꨅဝ်ꨳꨁဝ်တေꨵတေꨵယဝ်ꨳ။ꨡမ်ꨲꨓꨯေꨀုꨳမီးꨟိူꨓ်း မီးꨀုး ꨓ်ꨮးဝꨱင်းသေ ꨡမ်ꨲ ꨁꨯꨳꨕꨤတ်ꨳယဝ်ꨳꨟုး။ ꨀွပ်ꨳꨟဝ်းꨟꨱတ်းꨅိူဝ်ꨵꨓꨯတိꨵတိꨵယဝ်ꨳ ꨟဝ်းꨡမ်ꨲ မီးတꨤင်းꨁိုꨓ်ꨳယ်ꨮꨲ တူꨉ်းꨬလꨳꨓ်ꨮးမိူင်းတꨯး ဝုꨵ ꨓꨯꨵꨁဝ်ꨡꨰꨓ်ꨳꨟꨰင်းယ်ꨮꨲ သေပိုꨓ်ꨳယဝ်ꨳ။ꨅူမ်း S.S.S ꨁဝ်ေꨀုꨳပꨱꨓ်ဝုး ꨅူမ်း ဝꨤꨓ်ꨳပꨤင်ꨲေꨀုꨳပꨱꨓ်ဝုꨵ (မိုင်ပန်ပြည်သူ.စစ်) တꨯးꨟဝ်းသမ်ꨵꨡမ်ꨲမီး သင်။ꨟဝ်းꨁꨯꨳꨟူꨵ ꨓ်ꨮးꨀꨤင်ꨳꨅ်ꨮ ꨅုမ်းꨡꨓ်ꨟꨱတ်း ပီꨲတုꨵꨅိတ်ꨲ (Public Military) ꨁဝ်မိူꨓ်ꨓꨯ ꨅုမ်း မိူင်းꨁိူဝ်း (Public Military No 1) ၊ သꨰင်ꨀꨰဝ်ꨵ (Public Military No 2) ꨬလꨳꨅုမ်း
ꨀုꨲလိ (Public Military No 3) လိူဝ်သေꨓꨯꨵ သမ်ꨵမီးထꨰင်ꨳ ꨀုꨲလိထွꨯꨵ ꨁဝ် ꨅုမ်း သိုꨀ်းတꨯး ꨀꨰင်းတွင်ꨳꨁဝ် ꨁဝ်ꨅုမ်းတꨯးꨟဝ်းꨓꨯꨵ တေꨟꨱတ်းသင် ယိပ်း ꨀွင် သေယဝ်ꨵ သမ်ꨵတေယိုဝ်းꨕ်ꨮ ꨡမ်ꨓꨓ်ေꨀုꨳꨁိုꨓ်းယိုဝ်းတꨯး မꨤꨓ်ꨳတေꨵ ꨁဝ်ꨡမ်ꨲ ꨟတ်းယိုဝ်းယဝ်ꨳ။ꨅုမ်းꨟဝ်းတꨯးꨟဝ်းမုးꨕွမ်ꨵꨀꨓ်ꨬလꨳ ꨟဝ်းတေပေုး Bumar Government ယ်ꨮꨲယဝ်ꨵ မီးꨟဝ်းꨀူꨉ်းယဝ်ꨳတပ်ꨵသိုꨀ်းယ်ꨮꨲ သေပိူꨓ်ꨳ။ꨀွပ်ꨳသင်သူꨁဝ်သမ်ꨵ ꨡဝ်ငိုꨓ်းတီꨳꨀူꨓ်းမိူင်းသေသမ်ꨵ ꨡမ်ꨲꨟꨱတ်းꨅွမ်း ꨅွမ်းꨓꨓ် ပူꨲꨟဝ်းꨓꨤꨯး ꨟဝ်းꨟꨱတ်းဝꨯꨵလုꨳ။ပေုးꨡဝ်ငိုꨓ်ꨳꨀူꨓ်းမိူင်းလူဝ်လꨯꨳꨅွꨯꨳꨀꨤꨓ်ꨳꨀူꨓ်းမိူင်း လူဝ်လꨯꨳမေုꨳꨟꨱတ်းꨀꨤꨓ်ꨳပꨓ်ꨀူꨓ်းမိူင်း။ယုꨲꨟꨱတ်းꨓု ယိပ်း ꨀွင် ယဝ်ꨵတုꨲယိုဝ်း မု ဝုꨳ သိူဝ်ဝုꨳ ꨟိꨟိ။ပေုးꨟꨱတ်းꨀꨤꨓ်ꨳမိူင်းတေꨵတေꨵ တေုꨳလꨱဝ်ꨓꨯꨵ မီးꨕွꨓ်းလီတွꨓ်ꨳတုတꨯးꨟဝ်းယဝ်ꨳ။ ယုꨲပေ ယူꨲꨓ်ꨮးဝꨱꨓ်းသေ ꨟꨱတ်းꨀꨤꨓ်ꨳ Business ꨀူꨉ်း။ပေုးသူꨡမ်ꨲꨁꨯꨳꨟꨱတ်းꨀꨤꨓ်ꨳဝꨤꨓ်ꨳမိူင်းေꨀုꨳ ꨀꨮုꨲယွမ်ꨵပꨓ်မꨤꨓ်ꨳꨬလꨳꨀွင် သူꨀွပ်ꨳꨓꨯ ꨅဝ်ꨳယွတ်ꨳသိုꨀ်းꨡမ်ꨲꨁꨯꨳဝꨯꨵ ပီꨲတူꨵꨅိတ်ꨲ ယဝ်ꨳ။ꨡဝ်ငိုꨓ်းꨀူꨓ်ꨳမိူင်းသေ သမ်ꨵꨡမ်ꨲꨟꨱတ်းသင်ပꨓ်ꨀူꨓ်းမိူင်း ꨟူꨵတူဝ်သေ လီꨡꨤꨯတူဝ်ꨅဝ်ꨳꨀဝ်ꨲလုꨳ။ꨟဝ်းꨟꨱတ်းꨀꨤꨓ်ꨳဝꨓ်ꨳမိူင်း လꨤတ်ꨳယဝ်ꨵ လူဝ်ꨟꨱတ်းꨅွမ်း ပေုးပꨱꨓ်တꨤင်းꨓုꨳꨀူꨓ်းတꨤင်းꨓမ်တေꨵ ဝုꨳ ꨀဝ်ꨟꨀ်ꨵꨁိူဝ်း ꨀဝ်ꨟꨀ်ꨵမိူင်း ꨀဝ်ꨟꨀ်ꨵ
မိူင်းတꨯးꨬလꨳ ပီꨳꨓွင်ꨵတꨯး ꨀူꨉ်းꨓု လꨤꨯးꨟꨱတ်းမ်ꨮးသမ်ꨵ ꨡမ်ꨲꨅ်ꨮꨳလꨤꨯးမꨓ်း။ꨟဝ်းပꨱꨓ်ေꨀုꨵ ꨅꨯးလူး ပေုးꨟဝ်းလꨤတ်ꨳပေုးꨟဝ်းပꨱꨓ်လꨯꨳꨅွင်ꨲလꨤတ်ꨳꨬလꨳ ပေုးꨡမ်ꨲပꨱꨓ်လꨯꨳယုꨲပေလꨤတ်ꨳꨟဝ်းလီꨡꨤꨯꨀွပ်ꨳသူꨅဝ်ꨳꨡိူဝ်။ꨁုးꨟဝ်း တꨰမ်ꨳꨅိူဝ်ꨵꨓꨯ ꨡမ်ꨲꨅ်ꨮꨳဝုꨳ ꨟဝ်းပီꨳꨓွင်ꨵတꨯးꨟဝ်းꨅင်ꨳꨀꨓ် ꨁꨯꨳꨟꨮ်ꨳꨟူꨵပွင်ꨳꨅ်ꨮꨀꨓ်ꨬလꨳ ꨁဝ်ꨳꨟုꨀꨓ်ꨡိူဝ်။ꨕွꨓ်းလီꨓꨯꨵ လꨯꨳꨀမ်ꨵလꨱဝ်ꨀူꨉ်းꨡမ်ꨲလꨯꨳသွင်ꨲပွင်ꨳ။ꨀူꨓ်းမိူင်းတꨯးꨟဝ်းသမ်ꨵ ꨡမ်ꨲ မီးငိုꨓ်းꨡမ်ꨲ မီးꨓမ်ꨵ ပေုးꨁꨯꨳတꨤꨯယဝ်ꨳသူꨅဝ်ꨳꨁဝ်သမ်ꨵ ꨡဝ်ငိုꨓ်းပီꨳꨓွင်ꨵတꨯးသေ ပေုးꨟꨱတ်းꨕွꨓ်းလီတူဝ်ꨅဝ်ꨳꨀဝ်ꨲꨬလꨳ ꨓꨤင်းꨬမးꨀူꨉ်းတေꨵ ꨁုꨳꨟဝ်း ꨡꨤꨯတင်ꨲ သူတေꨵတေꨵယဝ်ꨳေꨀုꨵသိုꨀ်းꨅဝ်ꨳꨁဝ်ꨁုꨳ။ꨅုမ်းတꨯးꨟဝ်ꨳပေုးꨟဝ်းမုး
ꨕွမ်ꨵꨀꨓ် တꨤင်းမူတ်းမူတ်း တပ်ꨵသိုꨀ်းမꨤꨓ်ꨳယဝ်ꨵ ꨟဝ်းꨀူꨉ်းယဝ်ꨳ ꨟꨰင်းသိုꨀ်းတေယ်ꨮꨲသေပိူꨓ်ꨳꨀွပ်ꨳꨟဝ်းꨡမ်ꨲ မီးꨟꨰင်းသိုꨀ်းꨬလꨳ သိုꨀ်းꨀူꨓ်းယဝ်ꨳ ꨅုမ်းꨓိုင်ꨳယဝ်ꨵ ꨅုမ်းꨓိုင်ꨳယွꨓ်းꨁꨯꨳꨡဝ် မိူင်းတꨯး ꨁꨯꨳꨕꨤတ်ꨳꨡွꨀ်ꨲ ꨓ်ꨮးမိူင်းတꨯးꨟဝ်းꨀူꨳꨅုမ်းꨅုမ်း သင်တꨯးꨟဝ်းꨕွမ်ꨵꨀꨓ်လူးꨅွင်ꨲမꨓ်းတေꨵပꨱꨓ်မုးꨅိူဝ်ꨵꨓꨯ ꨟိူဝ်လုꨳ ဝူꨓ်ꨵတူꨉ်းꨬလꨳ ။ ꨀွပ်ꨳဝုးတူꨉ်းပူꨓ်တူဝ်ꨅဝ်ꨳꨀဝ်ꨲꨀူꨉ်းယဝ်ꨳ ꨡမ်တူꨉ်းꨓုꨳလိꨓ်မိူင်းတꨯးꨟဝ်း ယ်ꨮꨲꨟု လꨱꨀ်ꨵ ။ ဝꨯးꨓꨯꨵမုး ꨟဝ်းꨀူဝ်တꨯးꨟဝ်းလꨯꨳꨁိုꨓ်း ယွꨓ်းတꨤင်းꨅွꨯꨳထꨱင်ꨳတီꨳ ꨅုမ်းꨅိူဝ်ꨵꨁိူဝ်းတꨯးꨓ်ꨮးမိူင်းတꨯးꨟဝ်းꨀူꨉ်းယဝ်ꨳ။ပူꨲ ꨟဝ်းꨓꨤꨯးꨟဝ်းတေꨵ ꨟꨱတ်းမုးပꨓ် လီလီယဝ်ꨳ ꨓꨯꨵ ယဝ်ꨵပꨱꨓ်မိူင်းတꨯးꨟဝ်း တွꨓ်ꨳတုꨲလုꨀ်ꨳꨟဝ်း
လꨤတ်ꨟဝ်းယူꨲ ꨁဝ်ꨟꨱတ်းမုးပꨓ်ယဝ်ꨵ ꨀမ်ꨵꨟဝ်းမုး ပုးလိူတ်ꨳတꨯးယူꨲေꨀုꨳသမ်ꨲ ꨡမ်ꨲꨟꨀ်ꨵꨀꨓ် သမ်ꨵꨡဝ်ꨀꨓ်တꨯꨤ ပေꨵꨀိꨓ်ꨳꨀꨓ်ꨀူꨉ်းꨓꨯ ပူꨲꨟဝ်းꨓꨯꨤးꨟဝ်း တꨤꨯꨀꨮုꨲေꨀုꨳ တေꨡမ်ꨲꨟွတ်ꨳတီꨳလီ ။ꨀွပ်ꨳဝုꨳ ပꨤꨓ်ꨟဝ်းမုး ꨡမ်ꨲမီးꨓမ်ꨵꨅ်ꨮꨟꨀ်ꨵꨁိူဝ်းတေꨵတေꨵ ပꨱꨓ်ꨀူꨓ်းꨟꨱတ်းꨀိꨓ်ꨳꨀꨤꨓ်ꨳဝꨓ်ꨳမိူင်းꨀူꨉ်း။မုးꨬလꨳꨟဝ်ꨳꨕွမ်ꨵꨀꨓ် ပေုးꨀူဝ်မိူင်းတꨯးꨟဝ်း ꨟꨤꨯေꨀုꨳေꨀုꨵသိုꨀ်းꨅဝ်ꨳꨁဝ်။
တꨰမ်ꨳ ꨅꨤꨯးလွတ်ꨳလꨰဝ်း (ꨁꨮꨤင်းပꨓ်ꨡီꨵꨓိုင်ꨳသင်ꨁုꨳတꨰမ်ꨳꨕိတ်း)
8:16 PMShan State Army
3:36 AMOTHERKNOWLEDGE No comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်လာခဲ.တာငြိမ်းချမ်းမူဆိုတာ ဒီတစ်ခါပဲရခဲ. တယ် ပွင်.ပွင်. လင်းလင်း လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ကြတယ်လို. ကြီးပွားတိုးတက်မူလဲ အရမ်းမြန်တယ်လို. တစ်ချို. Crony တွေကပြောပြောကြတာ။ပာုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ် သူတို.အတွက်တော. ကြီးပွားလာမယ် တိုးတက်လာမယ် ပွင်.ပွင်. လင်းလင်း လဲလုပ် ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ခက်တာက ပြည်သူလူထု စားဝတ်နေရေးအခုထိပဲ အဆင်ပြေမူမရှိဘူး နေ.စဉ်သလို မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ ဆန္ဒပြ တဲ.လူတွေက တိုးတိုးလာတာ အဲဒါက အပြောင်းအလဲလုပ်တယ်ဆိုတာ အောက်ခြေထိမလုပ်လို.ပေါ.။ Where is reform and transition ? နေ.စဉ်ရက်ဆက် Conflict ဖြစ်ကြတာ ဘယ်တော.မှ မပြီးပြတ်ဘူး။ဘာ
လို.အဲလိုဖြစ်နေရသလဲ အစိုးရကိုတိုင် လုပ်ဆောင်နေတဲ. အရာတွေက ပာုတ်မှမပာုတ် တာ မြန်မာပြည်မှာ President ကအဏာရှိတာသလား General မင်းအောင်လှိုင်က ပါ ၀ါ ပိုရှိသလား ဒါမှမပာုတ် အမျိုးသားလွတ်တော်နယက ဦးရွေမန်းက ပိုပြီးတော. အာဏာရှိသလား ဒီသုံးဦးကိုကြည်.ခြင်းအားဖြစ် တစ်ယောက်နဲ.တစ်ယောက်တောင် တည် .မယ်. ပုံမပေါ်ဘူး။ဦးသိန်းစိ လုပ်တဲ. Truce ကလဲ အခုထိပဲ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ဆဲ ရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီလား (Nationwide Truce ) ဒါမှ မပာုတ် ၂၀၁၅အထိ သယ်သွား မလို.လား။မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစပြီး အပစ်ရပ်ဆဲ ရေးလုပ်လာတာ ဒီနှစ်ပါရင် လေးနှစ်ပြည်
.ပါပြီ ဒါပေမဲ. ရှမ်းနဲ. ကချင်ဖက်က သေနတ်သံတော. မတိတ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒီချိန်မှာ တိုင်းရင်းသားဆိုတာ သူပုန်မပာုတ်ဘူး ငြိမ်းချမ်းရေးသမားတွေပါ။
Constitution 2008 ပြင်မယ်ဆိုလဲ ထိထိရောက်ရောက်မူရှိလို.လား လုပ်လိုက်တဲ. အလုပ်က Limbo ဖြစ်ကုန်ပြီ။ပစ်ခတ်မူဖြစ်တိုင်း ဦးအောင်မင်းစီ အကြောင်းကြားတယ် ဘာမှ မထူးပါဘူး။ဒီလိုပဲ
ဖြစ်လာတိုင်းကိစ္စပာာ တောင်းပန်တာတောင် မထိုက်တန်တော.ဘူး။ပီးခဲ.တဲ. မြောက်ပိုင်း SSPP/SSA စစ်ဖြစ်တုန်းကလဲ ဦးအောင်မင်းစီအကြောင်းကြားတယ် ဘာထူးလဲဘာ မှမထူးဘူး။နောက်ဆုံး လူလည် လုပ်သွားလိုက်သေးတယ်။ဒါကိုကြည်.ခြင်းအားဖြစ် ဗမာပြည်သည် အာဏာအရှိဆုံးလူသည် သုံးဦးပဲ ရှိတာ အဲသုံးဦးကို နောက်ကနေ န.အ.ဖ (နွားအဖွဲ.) ဦးသန်းရွေ ကြိုးကိုင်ထားတယ်လို. ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာမှကို မပြောင်းလဲသေးတာ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေဆို ပိုဆိုးသေး အစိုးရက အပစ်အခတ် ရပ်လုပ်နေတဲ.အချိန်မှာ အခွင်.ကောင်း အခါကောင်းေ တွကိုယူပြီး သူတို.နယ်မြေတွေ
စိုးမိုးနိုင်ဖို.အတွက်ပဲလုပ်လုပ်နေတာ။မကြာသေးခင် ၀ တပ်မတော်က ပြည်နယ် အဖြစ် တောင်းဆိုတယ်ဆိုတာ မတားပါဘူး သူတို. Chanceပဲ။ပေးမယ်မပေးဘူးဆိုတာ လဲပြည်သူလူထုပဲ ဒါပေမဲ. ကျွန်တော်.အနေနဲ. လုံးဝ မထင်ပါ ဗမာအစိုးရက ပေးမယ် ဆိုတာ။ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော. နယ်မြေသေးသေးလေး တွေတောင်မှ အဲဒါ ဗမာလူမျိုး အခြင်းခြင်းတောင်မှ မပေးချင်ပဲနဲ. တစ်ချိန်လုံး သူတို.နယ်မြေစိုးမိုးဖို.ပဲသိတယ် အဲလောက် အာဏာရူးတာ ဖြစ်နိုင်ပါ.မလား။ကျွန်တော် ကြောက်တာ (Afraid) ဗမာ၏ မူဝါဒ ကိုပဲ ဘယ်လိုမူဝါဒ လဲဆိုတာ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ဥပမာ ရှမ်းပြည်နယ်ထဲက
တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စစ်ဖြစ်အောင် ကြားထဲကထိုးပေး ကြားထဲကနေ လှူပ်စွာပေး အဲဒါ ပာို ၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းတုန်းက ကြည်.ပါလား ၀ က ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင် ပိုင်းကိုလာတိုက်တာ ကျွန်တော်တို.အချင်းချင်း ဘာမှ စစ်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိ ဘူး။ဗမာအစိုးရကကြားထဲကနေထိုးပေးလိုက်လို. ဖြစ်ရတာအခုပာာလဲ ၀ ကတောင်းဆို
မယ်ဆိုတာ ဗမာအစိုးရ နူတ်ပိတ်နေတယ်ဆိုတာ မရိုးသားမူပဲ တစ်ခုခုတော.သူတို. လုပ်ဆောင် တော.မယ်။အဲဒါကို ကြည်.တတ်အောင်ကြည်.ရမယ် မြင်တတ်အောင်မြင်ရမယ် ကျော်
လွန်လာခဲ.တဲ. အတိတ်က အတိတ်မှာထားလို.မရဘူး သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ယူကြရမယ်။အခုနောက်ပိုင်းဆိုပိုဆိုးသေး တအေား (ပလောင်) တို.ကရှမ်းမျိုးနွယ်စုမပာုတ်ကဲ. ပအိုဝ်ကလဲ ရှမ်းမျိုးနွယ်စုထဲကမပာုတ် လာပြန်ပြီ နောက်ထပ် ဓနုတို. အင်းတို.။
ကယ် နောက်ထပ် ရှမ်းနီ တို. ခွဲထွက်ကုန်ကြပြီ အဲဒါကဘာလဲ အဲဒါက ငါတို.အချင်းချင်း ရှမ်းလူမျိုးကြီး ကို ပပျောက်သွားအောင်လုပ်တာ လူမျိုးနွယ်တွေကိုအားပေးတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ် ကံကြမ္မာက ကောင်းကိုမကောင်းတာ ရိုးသားလွန်းလို.ခံခဲ.ရတာလဲ မနည်းတော.ဘူး။ပင်လုံစာချုပ်ကနေစစပြီးဆက်တိုက်မှားလာခဲ.တာ အခု ထိပဲ ရှမ်းပြည်သယံဇတ ရှမ်းလူမျိုးမခံစားရဘူး တရုတ် ကုလား ဗမာတွေတာ ကောင်း စားသွားတာ ရှမ်းလူမျိုးကြတော. နိုင်ငံခြားကိုရောက်သွား လူများ အိမ်ဖော်သွားလုပ်တစ်လ မှ သုံးလေးသိန်းရရှမ်းပြည်က သယံဇာတ တို.ကျောက်တို. သတ္တုတို. ပတ္တမြား တို. ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ အကုန်လုံးတရုတ်တွေ သယ်သွားကုန်ပြီ ရှမ်းမလေးပါမ ကျန်သယ်သွားကုန်ပြီ ကောင်းစားတာ အစိုးရ ကြီးပွားတိုးတက်သွားတာ တရုတ်ကကယ်။ အဲလိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ တိုင်းရင်းသားအရေးကိုတကယ်လေ.လာပြန်လဲသုံးသ
ပ်ကြည်.မယ်ဆိုရင် အကုန်လုံးအရှူံးတွေကြီးပဲ ခံခဲ.ရတာတွေကြီးပဲ။အဲဒါကြောင်.လူတွေ နိုင်ငံရေးလှူပ်ရှားသူတွေက Federal မူကိုလိုတယ်လို.ပြောတာ Federal မူဆိုတာPower Share လို.ပြောလို.လဲရပါတယ် တရုတ်ပြည်ထဲကလူမျိုးတောင်မှအများကြီးပဲ
သူတို.က Federal စနစ်တောင်မပာုတ်ဘူး။ အကုန်လုံး Autonomy တွေပဲ။ဗမာပြည်လဲ တကယ်တမ်း ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် တည်ထောင်မယ်ဆိုရင် တရုတ်လူမျိုးသည် ဗမာ ပြည်မှာ ခိုင်းဆေ. (slaver) လာလုပ်နေရပြီ။ထိုင်းတို.လဲ ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံကိုလာပြီး တော. ဖားနေအုံးမယ် အခုလို မဖြစ်လာ၇တာ ဗမာအစိုးရက အာဏာရူးလို.ပေါ.။နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်မှာ အပစ်ရပ်တာ ချက်ချင်းရပ်ဖို.ခက်တယ်လို.ပြောကြတာအဲဒါကလေးကုလား စကားပြောတာ။ အပစ်ရပ်တယ် ဆိုတာ တစ်ပတ်တောင်မပြောနဲ.တစ်ရက်ထဲနဲ.တောင် ချက်ချင်းရပ်လို.ရတယ် တကယ်လုပ်ချင်ရင် လုပ်ပေါ. တိုင်းရင်းသားနယ်မြေမှာ ထိုးစစ်ထားတဲ.နေရာတိုင်းမှာ နောက်ဆုပ်ပေးပေါ. ဥပမာ SSPP/SSA
တို.ဘာကြောင်. စစ်ဖြစ်နေတာလဲ အစိုးရက စစ်ကြောင်းလည်လို. လှည်.စရာရှားလို.တောထဲသွားတာကို သေနတ်သံမထွက်ပဲနဲ. ရှိပါမလား။တကယ်အပစ်ရပ်ချင်တယ်ဆို
ရင် အဲဝမ်ပာိုင်းနယ်မြေထဲက တပ်တွေအကုန်ပြန် ဆုပ် လားရှိုးမှာလာထား အဲလိုဆိုရင် စစ်ဖြစ်ချင်ရင်တောင်မှ မဖြစ်တော.ဘူး။
အစိုးရဖက်ကမလုပ်ချင်လို.ပေါ. ရှင်းနေတာပဲ။ ဒီတစ်ခေါက်ပါရင် နှစ်ခေါက်ရှိပြီ ရှမ်းခံရတာ ပထမတစ်ခေါက်က ဦးခွန်ဆာခေတ်အဲတုန်းက စစ်အနေနဲ. Offensive လုပ်မယ်ဆို ကျိန်းသေတယ် ဘယ်တော.မှ ရမှာမပာုတ်ဘူး စစ်အနေနဲ. မရတော. နိုင်ငံရေးအနေနဲ. လုပ်ရော ကယ်တိုင်းရင်းသားတွေက နိုင်ငံရေး သိပ်နားမလည် မကျွမ်းကျင်တော. ခံရော အခုလဲ ပြန်ကျင်.သုံးနေပြန်ပြီ ဘယ် အဖွဲ.အစည်းက ပျော.သွားအုန်းမလဲတော.မသိဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တော်လှန်ရေးနဲ. စီးပွားရေး မရော ပါစေနဲ. စီးပွားရေး ပာာ စီးပွားရေးသပ်သပ် ထားပါမပာုတ်ရင် ပြိုသွားနိုင်တယ်။အစိုးရသည် အဲလိုနဲ.ပဲ စီးပွားရေးနဲ. တိုင်းရင်းသားကိုဆွဲဆောင်နေတယ်အခုက။အဲဒါကိုနားလည်ကြပါ အပစ်ရပ်ချင်လို. သူတို.ရပ်ချင်တာမပာုတ်ပါ ဗမာအစိုးရတာ အရပဲရှိချင်တာ အပေးဆိုတာ ဘယ်တော.မှ မပေးချင်ပါ အဲဒါကိုနားလည်ကြပါ ဗမာအစိုးရ ရောင်တိုင်းလိုက်မရောင်နဲ.။ Cease fire လုပ်တာချက်ချင်းလုပ်လို.ရပါ
တယ် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေက အစိုးရဆုပ်ပေးရင်။ ဒါပေမဲ. ဖြစ်လာခဲ.တဲ. နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ် ကအတိတ်တွေတော. ဘယ်တော.မှ မမေ.ပါ။(အမှားများရေးတာ ရှိခဲ.ရင်သီးခံခွင်.လွတ်ပါ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ပေးတဲ.အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် မိုင်ဆွန်ခ )
1:36 AMPOLITICALSCIENCE No comments